कमल थापाकाे प्रश्नः के जनताले अान्दाेलन गरेर ल्याएकाे परिवर्तन विदेशी धर्म अंगाल्न हाे ? - खबरमञ्च खबरमञ्च
१९ मंसिर, खबरमञ्च, at 6:01 PM
By खबर मञ्च / December 5, 2018 / Comments Off on कमल थापाकाे प्रश्नः के जनताले अान्दाेलन गरेर ल्याएकाे परिवर्तन विदेशी धर्म अंगाल्न हाे ?
काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दु राष्ट्रकाे पहिचानलाई समाप्त पार्ने कार्यमा सरकार स्वयम संलग्न रहेकाे अाराेप लगाएका छन् ।
२ नं प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण तथा सम्मलेनकाे जनकपुरमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपालकाे सदियाैं देखि कायम रहँदै अाएकाे हिन्दु राष्ट्रकाे पहिचान समााप्त पार्ने कार्यमा सरकारकाे संलग्नता अापत्तिजनक रहेकाे बताए ।
“याेजनाबद्ध र संगठित रुपमा भइरहेकाे धर्म परिवर्तनले याे ८-१० वर्षकाे बीचमा दशाैं लाख धर्म परिवर्तन गराइएकाे छ, के जनताले अान्दाेलन गरेर ल्याएकाे भनिएकाे परिवर्तन नेपालकाे सनातन धर्मलाई समाप्त पारेर विदेशी धर्म अंगाल्न हाे ?,” उनले प्रश्न गरे । साथै उनले विवादास्पद धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ताम झाम गरेर सरकारले अाफ्नै साख गिूराउने काम गरेकाे जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा बाेल्दै उनले देशकाे शान्ति सुरक्षाकाे अवस्था बिग्रँदै गएकाेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे । निर्मला पन्त हत्या प्रकरण स्मरण गर्दै उनले भने, “४ महिना पूरा भयाे , सरकाले अझै पनि अपराधि पत्ता लाउन सकेकाे छैन , त्यति मात्र हाेइन अपराधिलाई जाेगाउने, प्रमाण लुकाउने, नकक्ली बयान दिने र नक्कली अभियुक्त खडा गर्ने जस्ता काम सरकारी संयन्त्रबाटै भइरहेकाे छ ।”
अपराधि लुकाउने काममा सरकार र प्रशासन संलग्न हुँदा जनताले सुरक्षा र न्याय पाउने अवस्था नरहने उनकाे भनाइ थियाे ।
उनले पार्टीकाे भागबण्डाकाे अाधारमा न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र समग्र राज्यनै सञ्चालन भइरहेकाे भन्दै जनताकाे ज्यान र धनकाे सुरक्षा गर्न पनि कठिन पर्ने अवस्था अाएकाे बताए ।
साथै उनले दुई तिहाईका साथ सशक्त सरकार बने पनि जनताले कुनै परिवर्तनकाे महशुस गर्न नसकेकाे बताए । उनले भने,” सरकार गठन भएकाे ९ महिना बित्याे, तर जनताले जीवनस्तरमा परिवर्तनकाे महशुस गर्न पाएका छैनन् ।”
उनले अब जनताले विकल्प खाेजिरहेकाे भन्दै कम्युनिष्ट र कांग्रेसकाे विकल्पकाे रुपमा फरक विचार बाेकेर खडा भएकाे पार्टी राप्रपा मात्र भएकाे दाबी पनि गरे ।
साथै उनले निर्वाचनमा बेहाेरेकाे हारले निराश नहुन पनि कार्यकर्तालाई अाग्रह गरे । “चुनावमा पराजित भएर निष्कृय भयाैं भने पार्टी कमजाेर हुने मात्र हाेइन हाम्राे एजेण्डा पनि समाप्त हुन्छ, हारकाे बाबजुद नयाँ उर्जा र याेजनाका साथ अघि बढ्नु बाहेक अर्काे कुनै विकल्प छैन । एउटा चुनाव हार्दैमा सिद्धान्त मर्दैन । देशकाे वर्तमान अवस्थालाई इमान्दारीका साथ समिक्षा गर्ने हाे भने हाम्राे एजेण्डा प्रति जनताकाे विश्वास र समर्थन बढेर गएकाे छ ।”
Last Modified: December 5, 2018 @ 6:41 pm
स‌ंघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी छिटै हल हुन्छः मन्त्री ज्ञवाली